केबीसीमा ५ करोड जितेका सुशील कसरी बने फेरी कंगाल ? यस्तो छ कहानी – Dainik Samchar
August 24, 2021 479
एजेन्सी । केही बर्ष पहिले मिडियामा खबर आयो कि बिहारको मोतिहारी का सुशील कुमार जो कौन बनेगा करोडपति (केबीसी) मा पाँच करोड रुपैयाँ जितेका थिए, एक गरीब बनेका छन्। सुशील कुमारले केबीसीमा ५ करोड रुपैयाँ जितेका थिए र यसबाट कर कटौती गरी ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ पाएका थिए।
जसलाई सुशील कुमारले दुई तले घर बनाउन को लागी प्रयोग गरे र यो पैसा केहि ठाउँमा लगानी गरे। ५ करोड जितेर करोडपति बनेपछि सुशील कुमारको जीवन परिवर्तन भयो। मानिसहरूले उनलाई चिन्न थाले, उनी धेरै कार्यक्रमहरुमा मुख्य अतिथि को रूपमा आमन्त्रित भए तर २०१५ मा एउटा समाचारले उनीहरुमा धेरै नकारात्मक असर पारेको थियो।
त्यो उसको गरिब भएको खबर थियो
सुशील कुमारले भारतीय मिडियालाई दिएको एक अन्तरवार्ताका क्रममा भने कि २०१५ मा जब बिहारमा विधानसभा चुनाव हुन लागेको थियो, एक रिपोर्टर मेरो साक्षात्कार गर्न आए, उनले मलाई राजनीतिसंग सम्बन्धित केहि प्रश्नहरु सोधे र सोधे कि तपाई यस पटक बिहारमा चुनावमा उम्मेदवार बन्नुहुन्छ ? जसको लागी मैले इन्कार गरें।
एक शब्द मा, उनले मलाई सोधेकी तपाइँ केबीसीमा जितेको पैसा के गर्नुभयो, तपाइँ आफ्नो बुबाको नाममा कती लगानी गर्नुभयो, तपाइँ तपाइँको श्रीमतीको नाम मा कती लगानी गर्नुभयो। अब बैंकमा कति पैसा छ ? मलाई उसको प्रश्न मन परेन र मैले क्रो ध ले भने कि मेरो सबै पैसा समाप्त भएको छ।
त्यो रिपोर्टरले यो शीर्षक बनाएर समाचार बनायो । केबीसीमा ५ करोड जितेका सुशील कंगाल बने। यस पछि यो खबर फैलियो र लगभग हरेक च्यानल मा चर्चा भयो कि केबीसी मा ५ करोड रुपैयाँ जित्ने सुशील कुमार अब एक गरीब छन्।
Prevवर्षौ विदेश बसेर कमाउँदापनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहापाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए
Nextसमोसा व्यापारी, रेल तथा मन्दिरमा गीत गाउँदै सफल भएका तीन स्टार !
नायिका रेखा थापा जस्तै देखिने युवती टिकटकमा भाइरल (भिडियोसहित)